Wasiir amaanay iskuul Soomaaliyeed | Somaliska
Wasiirada Arimaha Yurub u qaabilsan Sweden Birgitta Ohlsson ayaa amaantay Iskuul ilmaha yaryar wax lagu baro oo ku yaal magaalada Flen. Iskuulkaan ayaa lagu magacaabaa Hooyo kaasoo ah mid ilmaha Soomaalida wax lagu baro. Birgitta Ohlsson oo booqatay 3 goobood oo ka mid ah gobolka Södermanland ayaa ku aamantahay iskuulka Soomaalida hawsha fiican ee ka hayaan arimaha isdhexgalka. "Geeska afrika aad ayaan u daneeyaa, dhowr jeerna Soomaaliya waan booqday. Marka iskuulkaan xiiso gaar ah ayuu ii leeyahay" ayay tiri Birgitta Ohlsson. Iskuulka HOOYO ayaa la aasaasay 3 sano ka hor.
Wasiirada Arimaha Yurub u qaabilsan Sweden Birgitta Ohlsson ayaa amaantay Iskuul ilmaha yaryar wax lagu baro oo ku yaal magaalada Flen. Iskuulkaan ayaa lagu magacaabaa Hooyo kaasoo ah mid ilmaha Soomaalida wax lagu baro.
Birgitta Ohlsson oo booqatay 3 goobood oo ka mid ah gobolka Södermanland ayaa ku aamantahay iskuulka Soomaalida hawsha fiican ee ka hayaan arimaha isdhexgalka.
“Geeska afrika aad ayaan u daneeyaa, dhowr jeerna Soomaaliya waan booqday. Marka iskuulkaan xiiso gaar ah ayuu ii leeyahay” ayay tiri Birgitta Ohlsson.
Iskuulka HOOYO ayaa la aasaasay 3 sano ka hor.